Semalt Expert Anotsanangura Zvinyorwa 12 ZveShokoPress Sites Unogona Kuumba Nako
WordPress ndiyo inonyanya kushandura mabhuroji nzvimbo nehuwandu hwehutungamiri huripo mumhizha yekutengesa nhasi. Kwemakore mashomanana adarika, WordPress yakatanga kuwana mukurumbira senhare inoshandiswa kushandiswa kana iri kuuya pakusika mabhuku. Iye zvino, WordPress inoshandiswa nemakumi emamiriyoni evashambadzi uye vatengesi vanogadzira kugadzira mawebsite kubva kune masayiti ehutano kusvika kumablogi evanhu.
Nhasi, zvinyorwa zvemashoko, mabhuku anozivikanwa, uye mawebhusayithi webhupu vari kushandisa WordPress kuti varove misika yavo yekutsvaga panguva. Muchikwata chekutengesa, WordPress nzvimbo dzakarongeka sezvakanakisisa.
Oliver King, nyanzvi yepamusoro kubva kune Semalt , anopa pano urongwa hwemashoko gumi nemaviri emawebsite aunogona kuumba nyore kushandisa WordPress.
WordPress inoumbwa nemapulagi akazara uye masheji akakwirira kuti aumbe e-commerce webhusaiti. E-commerce webhusaiti yakagadzirwa kuburikidza neShokoPress ine zvinhu zvakakosha zvinoita kuti vatengesi vagadzirise zvinyorwa uye vawedzere mabhuku ezvitoro. WordPress nzvimbo dzinoitawo kuti kuchengetedzwa kwakachengeteka kutumire uye kugamuchira zvikwereti kuburikidza nenzvimbo.
2. Bhizimisi maforamu
Uri kushanda mukugadzira bhuku rebhizinesi? WordPress ndiyo yakanakisisa yekushandisa iwe. Tora uchishandisa WordPress kuvaka bhizinesi webhusaiti webhusaiti uye kuwana mukana wekuwedzera bhizimisi rako rekutsvaga uye kuiswa kwezvikwata pawebsite yako. WordPress nzvimbo inobvumira vashanyi kutsvaga kuburikidza nemabhizimusi akawanda.
Shingaira kugadzirisa zviri mukati mako nekugadzira webhusaiti yako uchishandisa WordPress. Zvinowanzozivikanwa sewebsite yebasabase, mawebhusayithi edivi rinodikanwa mukati mekubatanidza kune magwaro anowanikwa uye zvinyorwa. WordPress inopa nyanzvi mukana wekutarisa zviripo kuburikidza nekushandisa tags uye zvikamu.
4. Masangano anowanikwa paIndaneti
Shandisa WordPress kuvaka sangano rako rekuInternet maererano nenyaya yaunonyatsoziva nayo. Wana mukana wekugovera zvauri kuita nevashanyi. Shandisa vashanyi urongwa kuti uite runyora rwemaimeri dzakapindura pane zvako..WordPress nzvimbo inobvumira vashanyi kuti vataure pane nzvimbo yako yekugara nyore nyore.
5. Nzvimbo dzepaIndaneti
Shandisa WordPress kuumba webhusaiti yepamusoro uye kuwana mukana wekuwedzera zvigaro zvakabatanidzwa nehutano hwakasiyana-siyana. Ipai vadzidzisi uye nyanzvi nemashoko ekunyora-chengetedza kuti zvive nyore kutonga uye kuwedzerwa zvakakosha zviripo panzvimbo yako.
Kubatana kwekutsvaga mawebsite kunowanzozivikaniswa kune vakawanda senhamba yehupfumi hwemawindi. Nokugadzira niche yakabatana mawebhusayithi uchishandisa WordPress, unogona kuwana mari yakawedzerwa nekutyaira chaiyo yepaiti yako pawebsite. Nhamba yakanaka yevashanyi inogona kuguma kutenga zvigadzirwa zvinokurukurwa mune zvinyorwa.
Rega zvigadzirwa zvako, zvigadzirwa, uye unyanzvi uite kutaura kwako. WordPress nzvimbo dzine zvinyorwa uye zvinhu zvinopa artists mukana wekuratidza maitiro avo kune vashanyi.
8. Community work board
Shandisa WordPress kuti uite bhizinesi rebasa riri paIndaneti apo vatengi vanogona kutumira uye kuwana mabasa nyore nyore. WordPress sites zviri nyore kutarisira uye kugadzirisa.
9. Photography-based based website
Ita webhupu yekutora mapepa uchishandisa WordPress kuti uwane zvinyorwa zveWiral uye Pingraphy panzvimbo yako. Isa zvinyorwa pamusha wako usingatauri zvikanganiso zvekodhi.
10. Website yebhizimusi
Sarudza kubva pane zvakasiyana-siyana zvemashoko uye zvikamu zveShoko rako rePepa yePepa uye uchengetedze shanduko kuti uenzane nebhizimisi rako.
WordPress inoita basa rinokosha pakubudirira kwemasayiti epa blog. WordPress site inogona kukurudzirwa nemumwe munhu anoda kuve newebsite.
Kuita kuti vaverengi vevashanyi nevanogona kutenga vatengi vatsva kuti vawane zviri mukati menyu ndizvo zvinokosha pakusarudza webhusaiti yepaji uye magazini. WordPress websites inopa vatori venhau mukana wekubudisa nhau dzakakwirira.
WordPress ndiyo nzira yakanakisisa yevatengesi nevatapi venhau vanoshanda pakutevedza motokari kune mawebsite. WordPress ine masheti akakwana, mapurundi, uye zvikamu zvokusarudza kubva. Kana uri kushanda pakuvaka webhusaiti, WordPress ndiyo nzira yakanakisisa yekufunga Source .